न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रश्‍न-हामीले कानून हेर्ने कि जुलुस ? – Nepal Press
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रश्‍न-हामीले कानून हेर्ने कि जुलुस ?
२०७७ माघ २० गते १४:१३
सुर्खेत । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पछिल्लो समयमा न्यायाधीशमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको बताएका छन् ।
‘अहिले अदालतमा कुनै मुद्दा आउँदा त्यसको पक्ष/विपक्षमा जुलुस र प्रदर्शन हुन्छ, ‘उनले भने, ‘न्यायाधीशले मिसिल हेर्ने कि, कानून हेर्ने कि जुलुस हेर्ने ? कसरी न्याय दिने ?’
न्यायपालिकामा विकृति र अनियमितता तथा विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने प्रभावकारी उपायहरुको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित समितिका संयोजकसमेत रहेका कार्कीले कतै आफ्नो बारेमा गलत समाचार आउने हो कि भन्ने डर न्यायाधीशलाई लाग्न थालेको महसुस भएको बताए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटहरुमाथि सुनुवाइको क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सल्लाहकार रहेको भन्दै न्यायाधीश कार्कीबारे संवैधानिक इजलासमा सहभागितामाथि प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाबारे भने सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकोले आफूले बोल्न नमिल्ने उनले बताए । न्यायाधीश कार्कीले भने, ‘अदालत संविधानको व्याख्याता मात्र हो । हाम्रो संविधानमा सबै क्लियर छ । क्लियर नभएको हकमा अन्यत्रको अभ्यासलाई आधार बनाएर फैसला हुनसक्छ । यसको मतलब संविधानमा लेखिएका बाहेक शब्द थप्ने/हटाउने काम अदालतले गर्दैन टेक्ने काम मात्र गर्छ ।’
प्रकाशित: २०७७ माघ २० गते १४:१३